Kenya oo diiday in muranka badda ee kala dhexeeya Soomaaliya lagu xalliyo Maxkamada Caalamiga
Nairobi Thu 08-10-2015 13:19:16
Danood Media Xeer illaaliyaha guud ee dalka Kenya Githu Muigai, ayaa sheegay in dacwadda Soomaaliya ay horgeysay maxkamada adduunka ay tahay mid sharci darro ah, taas oo Soomaaliya ay ku dooneyso inay ku qaadato dhulbadeedka iyadoo aan mareyn nidaam sax ah.
Githu Muigai,ayaa intaa raaciyay inuu jiray heshiis labada dal horey u dhexmaray, kaas oo dhigayay in arrinta qilaafka dhul badeedka lagu xalliyo wada xaajood oo aan maxkamad la horgeyn.
Wuxuu sheegay in haddii murankani la geeyo maxkamada ay noqoneyso in Soomaaliya ay si cad u jabisay heshiiskii ka dhaxeeyey labada dhinac,iyadoo buu yiri ay wanaagsan tahay in dhinacyada ay iyagu ka wada hadlaan muranka ka dhaxeeya oo aysan gaarin heer maxkamad iyadoo loo marayo sharciga caalamiga ah.
Kenya waxay ku eedeysay Soomaaliya inay dhinac aan wanaagsaneyn ka eegtay arrinta ku aadan muranka dhulbadeedka islamarkaana ay soomaaliya hilmaantay abaalkii Kenya u gashay Soomaaliya ee ahaa ciidamadeeda dagaalka kula jira Al-shabaab.
Soomaaliya iyo Kenya waxaa ka dhex jiray muran mudo dheer socday oo dhinaca badda ku saabsan iyadoo meelaha lagu muransan yahay ay ka buuxaan qeyraad isugu jira shidaal iyo Gaas.
Kenya ayaa ku celcelisay in loo baahanyahay in Soomaaliya ay ka fikirto islamarkaana maxkamadda adduunku ay ka fiirsato in Kenya ay u dirtay askarteeda si ay gacan uga siiyaan dowladda,taasoo sababtay iney dhibbane u noqdaan kooxo argagixiso ah oo weerarro ka geysta gudaha dalka Kenya.
Dowladaha Soomaaliya iyo Kenya,waxaa in muddo ahba ka dhextaagnaa muran badeed,kaas oo markii laysku mari waayay ay Soomaaliya u gudbisay Maxkamadda Caalamiga ah dacwad Kenya ka dhan ah,August 28keedii 2014-kii.
Ma jirto wax war ah oo ka soo baxay dowlada Federalka iyo Maxkamada Caalamiga ah ee ku saabsan hadalka ka soo yeeray dowlada Kenya.